Iwo mapfumbamwe akanakisa webcam zvirongwa zveWindows, macOS uye Linux 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Unogona kuwana zvimwe zvikamu zvewebhu webcam zvirongwa pamusika. Mamwe mafomu anoshandiswa kuyedza PC kamera uye kuona kana ichipa izvo zvinovimbisa. Vamwe vane chikumbiro chinonakidza uye chinosanganisira mafirita kumufananidzo wakatorwa. Kune zvekare dzimwe sarudzo dzinokutendera kuti utore zvese zvinoratidzwa kuti zviongororwe gare gare.
Pazasi pane 8 akanakisa webcam kamera zvirongwa zveWindows, macOS, uye Linux. Buda!
ManyCam inopa akati wandei anobatsira mabasa evhidhiyo musangano kana vhidhiyo chidzidzo kurekodha. Iyo application inokutendera iwe kunyora uye kudhirowa pachiratidziri, wedzera mifananidzo kune iyo vhidhiyo, sanganisira maumbirwo, pakati pevamwe. Izvo zvakare zvinoita kuti ufukidze iwo mufananidzo kubva pawebhu webcam nemafaira, kuratidza iyo komputa skrini kana kunyange nhare mbozha kamera.
Mushandisi achiri kugona kugadzirisa mavara, zoom, kuchinja opacity, pamwe nekushandisa mafirita anonakidza uye mhedzisiro. Iko zvakare kune sarudzo yekutepfenyura mhenyu pamapuratifomu akasiyana, senge YouTube, Twitch, uye Facebook. Kana, kana iwe uchida, chengetedza zvirimo kusvika ku720m mune yemahara vhezheni uye 4K mune yakabhadharwa vhezheni.
Vhidhiyo inogona kuchengetwa mune akakurumbira mafomati senge MP4, MKV, MOV, uye FLV.
ManyCam (yemahara, ine sarudzo dzezvirongwa zvakabhadharwa nemamwe maficha uye pasina watermark): Windows 10, 8 uye 7 | macOS 10.11 kana kupfuura
YouCam chirongwa chinopa maturusi ebasa nekutamba. Inoenderana nemhando dzakasiyana dzevhidhiyo yekufona uye mapuratifomu evhidhiyo, ine mafirita ekushongedza chaiwo. Tisingatauri mazana ezvakawedzera chaiwo mhedzisiro.
Kana zviri zvekuratidzira, mushandisi ane zviwanikwa zvekutora manotsi, simbisa vhidhiyo nemifananidzo, govera iyo skrini, pakati pevamwe. Yayo inoshamwaridzika interface inokutendera iwe kuti uwane makuru maficha nyore.
Kana iwe ukasarudza kurekodha, vhidhiyo inogona kuchengetwa mumatanho akasiyana, kusanganisira Full HD, muAVI, WMV, uye mafomati eMP4.
YouCam (yakabhadharwa, 30-mazuva emahara kuyedzwa): Windows 10, 8, uye 7
3. Webcam bvunzo
Webcam Bvunzo bvunzo yepamhepo inobvumidza iwe kuyedza mabasa anopiwa nePC yako kamera mune yakapusa nzira. Ingo pinda webhusaiti uye uwane bhatani Dzvanya apa kubvumidza kupinda kune ewebhu webhusheni. Wobva waenda ku Edzai kamera yangu. Iko kuongorora kunogona kutora maminetsi mashoma.
Izvo zvinokwanisika kuziva dhata senge resolution, bit rate, huwandu hwemavara, kupenya, kupenya, pakati pevamwe. Pamusoro pekuedzwa kwese, mushandisi anogona kuongorora zvimwe zvakasarudzika senge resolution, furemu rate uye maikorofoni. Iko zvakare kune sarudzo yekurekodha vhidhiyo pawebhusaiti pachayo uye nekuichengeta seWebM kana MKV.
Webcam bvunzo (mahara): Webhu
Windows pachayo inopa yakasarudzika system webcam chirongwa. Windows Camera iri nyore asi inoshanda imwe nzira, kunyanya kune avo vanongoda zvekutanga mabasa. Nekumisikidza Professional mode mune zvigadziriro, zvinokwanisika kugadzirisa iyo chena chiyero uye kupenya.
Kuti ugare uchigara mufuremu, iko kushandisa kune mamwe emhando grid. Iko zvakare kune sarudzo yekuchinja mhando yevhidhiyo pakati pe360p uye Yakazara HD uye iyo frequency, asi nguva dzose pa30 FPS. Mhedzisiro inochengetwa muJPEG uye MP4.
Windows Kamera (mahara): Windows 10
5. Webcam toyi
Webcam Toy iri nyore online application kune chero munhu ari kutsvaga mafirita mafirita kutora mifananidzo neiyo webcam. Ingo enda kune webhusaiti uye tinya Ready? Kunyemwerera!. Kana bhurawuza ichivhara kupinda, ipa mvumo yekushandisa iyo PC kamera.
Wobva wadzvanya pane bhatani Normal kurodha zvese zviripo mhedzisiro. Pane zvakawanda zvingasarudzwa, zvinosanganisira kaleidoscope, ghostly maitiro, utsi, firimu rekare, katuni, nezvimwe. Sarudza zvaunoda uye wozoenda kuchiratidzo chekamera kuti unyore.
Mhedzisiro yacho inogona kuchengetwa paPC kana nyore kugovaniswa paTwitter, Google Mifananidzo kana Tumblr.
Webcam yekutamba (mahara): Webhu
Zvakawanda kupfuura chirongwa chewebhu webhu, OBS Studio inozivikanwa nekuenderana kwayo nezvose zvikuru vhidhiyo kutenderera masevhisi. Pakati pavo, Twitch, Facebook Kubheja uye YouTube.
Asi hongu zvakare inobvumidza iwe kunyora yako kamera kamera uye chengetedza izvo zvirimo muMKV, MP4, TS uye FLV. Iyo resolution inogona kubva kubva 240p kusvika 1080p.
Iko kunyorera zvakare kune akati wandei ekugadzirisa maturusi anokwanisa kuita kuti yako zvinhu zvioneke sehunyanzvi. Pakati pavo pane maficha ekururamisa ruvara, girini kumashure, odhiyo chiteshi kusanganisa, ruzha rutapudzo, uye zvimwe zvakawanda.
OBS kudzidza (mahara): Windows 10 uye 8 | macOS 10.13 kana yakakwira | Linux
GoPlay inogona kunge iri sarudzo yakanaka kune vanotanga, asi ivo vanoda kubva pazvinhu zvekutanga. Chirongwa ichi chinopa mabasa ekunyora pachiratidziri, pamwe nekuisa mapikicha. Mavhidhiyo anogona kutorwa kusvika ku4K pa60fps uye akagadziriswa mune yakavakirwa-mukati mupepeti.
Iko kunyorera zvakare kunokutendera iwe kunyora yako PC skrini uye kuita mhenyu mavhidhiyo. Iyo yemahara vhezheni yekushandisa inokutendera iwe kuti utore mavhidhiyo emaminetsi maviri chete, iine watermark. Mhedzisiro yacho inogona kuchengetwa mu MOV, AVI, MP2, FLV, GIF kana mune odhiyo.
Enda kunotamba (mahara, ine yakazara yakabhadharwa vhezheni): Windows 10, 8 uye 7
8. Apowersoft Mahara Pamhepo Screen sahwira
Apowersoft Yemahara Pamhepo Screen sahwira yakakodzera kune avo vanofanirwa kunyora PC skrini vachiona mufananidzo webcam. Iyo saiti inopa zviwanikwa zve freehand screen kunyora uye kusanganisira maumbirwo. Zvese zviri online, asi usati watanga, unofanirwa kurodha pasi roketi rovhura zvishoma hapana PC.
Mhedzisiro yacho inogona kuponeswa kune komputa yako sevhidhiyo kana GIF, yakachengetedzwa kune iro gore, kana nyore kugovaniswa paYouTube neVimeo. Iyo resolution inogona kumisikidzwa yakaderera, yepakati kana yakakwira.
Apowersoft Mahara Pamhepo Screen sahwira (mahara): Webhu
Shandisa foni yako sePC webcam kuburikidza neWi-Fi kana USB tambo
Zvikumbiro zvekutora yako PC skrini yemahara
Inobatsira spy apps